CIN Khabar खेलकूदको रोग : खेल कम राजनीति बढी
खेलकूदको रोग : खेल कम राजनीति बढी
स्नेहा कर्ण मंगलबार, असार १०, २०७६, ०७:५८:००
काठमाडौं । कराँते खेल एउटा हो । तर, मार्सल आर्टअन्तर्गत करातेमा मात्रै दर्जन संघहरु छन । तेक्वान्दो, ओलम्पिक, एथ्लेटिक्समा पनि एउटै संघ छैन । नेपालको खेलकुद क्षेत्रको विकासका लागि भन्दै झन्डै १ सय ८३ वटा खेलकुद संघहरु गठन भएका छन् ।
खेल क्षेत्रकै मान्छेले पत्तो नपाएका योङमुदो, च्यानवारा, उडबल, परेवा उडान, लाठी संघ जस्ता दर्जनौ संघहरु खेलकुद परिषदमै दर्ता छन । संघका लागी सरकारले ३ करोड बजेट दिन्छ त्यसमा लुछाछुडी हुने गरेको छ ।
बजेट माग्ने र खेलकुदका नाममा विदेश जान पाइने लोभमा र राजनीतिक दलसँग आस्थाकै आधारमा पनि संघहरु जन्मिरहेका छन । खेलको विकास गर्छु भनेका संघले उल्टै खेल क्षेत्र विगारेको राष्ट्रिय फुटबल टोलीका पूर्व प्रशिक्षक सुरेन्द्र खातीको तर्क छ ।
१ सय ८३ वटा खेलकुद संघहरु अस्तित्वमा छन । राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितामा मुस्किलले तीन दर्जन खेल समावेस हुने गरेका छन । बाँकी खेल कसरी खेलिन्छ, कहाँ खेलिन्छ ? खेलकुदपरिषदलाई पनि जानकारी छैन ।
२००४ सालमा पहिलो पटक नेपाल एमेच्योर एथलटिक्स र नेपाल क्रिकेट संघ गठन भएका थिए । त्यसपछि ००७ सालमा नेपाल ब्याडमिन्टन संघ, ००८ सालमा अखिल नेपाल फुटबल र अखिल नेपाल टेबलटेनिस संघ गठन भएको थियो । नेपाल बक्सिङ संघ, नेपाल भलिबल संघ र नेपाल कबड्डी संघ २०३३ सालमै गठन भएका हुन । २०४६ देखि २०६६ सम्म धेरै संघ गठन भएको देखिन्छ ।
गएको तीन बर्षमा मात्रै २० वटा संघ थपिएका छन । जथाभावी संघले खेल क्षेत्र प्रभावित हुने गरेको पूर्व खेलाडी एवं बाँके पौडी संघका अध्यक्ष गोबद्र्धन सिंह सम्झनाको अनुभव छ । राष्ट्रिय खेलकुद परिषदमा राजनीति नियुक्ति हुने र सदस्यसचिवको चासोमा नयाँ खेल संघ थपिने क्रम बढ्दो छ । तर, राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका सदस्य सचिव केशवकुमार विष्ट भने खेलकुदमा राजनीति नभएको दावी गर्नुहुन्छ ।
बिष्ट सदस्यसचिव भएपछि झण्डै एक दर्जन संघ खारेज भएपनि १ सय ८३ वटा खेलकुद संघहरु अस्तित्वमा छन । राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितामा मुस्किलले तीन दर्जन खेल समावेस हुने गरेका छन । बाँकी खेल कसरी खेलिन्छ, कहाँ खेलिन्छ ? खेलकुदपरिषदलाई पनि जानकारी छैन ।
नेपाललाई विश्व स्तरमा चिनाउने माध्यम मध्येको एक हो खेल क्षेत्र । तर, खेलभन्दा बढी संघ, अनि संघका नाममा राजनीति । नेपाली खेलकूदको रोग नै बनेको छ ।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, असार १०, २०७६, ०७:५८:००